Kenya oo xasiloon maalin ka hor doorashada - BBC News Somali
Image caption Uhuru Kenyatta ayaa rajeynaya in dib loo soo doorto
Kenya neefta ayay isku cellinaysaa iyadoo ugu danbeyntii ay aamuseen sameecadihii waaweynaa ee ku rakibnaa gawaarida ee baahinayay ololoha doorashada. Waxaa lacaga cabsi qabaa inay rabshado dhacaan.
Aragti ahaan, hannaanka codeyntu waa mid wanaagsan:
Kaararka aqoonsiga ee qaabka elektaroonikada ah uma ogolaanayaan dadka inay codeeyaan wax kabadan hal mar iyo in kuwii dhintay lagu codeeyo kaarrarkooda.
Natiijooyinka waxa looga dhawaaqi doona heer deegaan doorasho.
Deegaannada la daabaco natiijadooda waxa si digital ah loogu diri doonaa Nairobi si loogu daro codadka kale.
Kormeerayaasha doorashada oo kumannaan gaaraya ayaa tagi doona goobaha cod bixinta.
Laakiin hadddii hannaanka Computer-da ay guuldarraystaan, waxa adkaan doonta in codadka la kala saaro, taasina waxay abuuri doontaa shaki.
Warar kale oo ku saabsan doorashada Kenya
Dilkii lagu khaarajiyay todobaadkii hore madaxii technoolijiyadda ee gudiga madaxabannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha (IEBC) ayaa sii kordhisay shakiga ah ku shubashada doorashada.
Chris Msando waxa uu madax ka ahaa hannaanka electaroonik ah, wuxuuna ka soo muuqday TV-ga isagoo dadweynaha u hubiyay in hannaanka combuuterada ay si hagaagsan u shaqaynayaan isla markaana aan la jabsan karin. Markii la jirdilay waxa maydkiisa laga helay meel keyn ah, taasina waxay abuurtay shaki ah inuu jiro qof qorsheynaya inuu doorashada faragaliyo.
Image caption Chris Msando waxa uu madax ka ahaa hannaanka electaroonik ah,
Gudiga IEBC waxay ku adkeysanayaan in hannaanka combuuterada ay wali shaqaynayaan, waxayna si guul leh u tijaabiyeen iyadoo dadku wada arki karo. Laakiin afar meelood meel goobaha cod bixinta ayaa ka baxsan deegaanada laga heli karo adeega internet-ka.
Arimaha kale ee muhimka ah e dhacay isbuucii hore, Jimcihii rag hubeysan ayaa u dhacay xarumaha mucaaradka ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay tirintooda gaarka ah ee codadka ugu talagaleen, waxayna halkaas ka qaateen computero.
Mar dambana labo qof oo ajnabi ah oo xogaha combuuterada falanqeeya oo la shaqaynayay mucaaradka ayaa Kenya laga musaafuriyay.
In ka badan 180,000 oo qof oo ka tirsan waaxyaha amniga ee qaranka ayaa la rumeysanyahay in la geeyay goobaha doorashada.
Image caption Raila Odinga, oo 72 jir ah, ayaa waayay doorashooyinkii 2007 iyo 2013
Arinta ugu xun ayaa noqon karta natiijooyinka oo aad isugu dhawaada iyo inuu guuldareysto hannaanka codeynta ee electronic ah, iyo in murashax aanu isu diyaarin inuu ogolaado in laga adkaado.
Haddii aanuu qofna ku guuleysan boqolkiiba konton codadka, waxa la aadi doonaa wareeg labaad. Laakiin maadaama aanu jirin murashax sedexaad oo la rumeysan yahay inuu codad badan heli karo, waxay u muuqataa in tartanku u dhaxayn doono labo faras.
Si kastoo ay wax u dhacaan, tani waxay noqon doontaa dagaalkii ugu danbeeyay ee dhexmara qoysaskan: Uhuru Kenyatta, oo ah wiilka madaxweynihii koowaad ee Kenya, iyo Raila Odinga, wiilka madaxweyne kuxiigeenkii ugu horeeyay isla markaana xiligiisii ugu badnaa siyaasadda ku qaatay mucaaradnimo.
Mr Kenyatta oo ah 55 sano jir haya talada dalka ayaa doonaya markiisii labaad iyo markiisii ugu danbeysay xilkan isagoo ka socda xisbigiisa Jubilee kaasoo tiro yar oo codad ah ku guuleystay doorashadii ugu danbeysay ee 2013-kii, inkastoo markaasi ay jirtay dacwad ka taalay maxkamadda caalamiga ah ee danbiyada isagoo loo haystay hurinta rabshado.
Faahfaahin ka soo baxaysa weerar lagu qaaday guriga madaxwayna ku xigeenka Kenya
Mr Kenyatta, oo ka soo jeeda qowmiyadda Kikuyu, iyo mucaaradkisii hore William Ruto oo ka soo jeeda qowmiyadda Kalenjin ayaa lagu eedeeyay inay huriyeen rabshado u dhexeeyay labada qowmiyadood.Dacwadahan waxay la xiriiraan rabshadihii dhacay doorashada kadib 2007-dii kuwaas oo lagu dilay 1,200 oo qof, boqolaal kun oo qofna ay guryahooda ka carareen.
Dad badan waxay codeyn doonaan iyagoo eegaya qabyaalada ama mid xisbi sida laga soo xigtay weriye Kenyan ah oo la ixtiraamo. Sidoo kale arimaha ku saabsan khayraadka ayay dad badan ku salayn doonaan codeyntooda.
Cunto yarida jirta iyo qiimaha alaabaha oo kor usii kacaya
Fadeexooyinka badan ee musuqmaasuq ee hareeyay dawladda
Dadka degan xaafadda iskuraranta ee Mathare oo kamid ah kuwa ugu waaweyn Nairobi ayaa dhab ahaantiii filaya dhibaato. Dadka nabada u dhaqdhaqaaqa iyo hogaamiyayaasha bulshada ayaa qabanayay isu soo baxyo nabadeed iyo hadalo loogu baaqayay dadka inay is xakameeyaan, is xushmeyn iyo midni
Hogaamiyayaasha siyaasadda ayaa hadalo qalafsan adeegsanayay marka ay taageerayaashooda la hadlayeen. Warar la isla dhexmarayo iyo kuwa kaloo ka soo horjeeda ayaa wareegaya xaafadaha isku raranta ah iyo baraha bulshada taasoo sii hurisay waxyaabaha lagu darayo ololaha iyo wararka beenta ah.
Haddii Raila Odinga uu guuldaraysto, dadka qaarkii waxay leeyihiin rabshado ayaa ka dhici doona goobaha mucaaradka, waxana booliska la siiyay qalab cusub oo ay uga hortagaan mudaaharaadyada. Waxa dhici kara isku dhacyo rabshado wata qaybaha kale ee wadanka halkaasoo dareenku aad u sareeyo.
Laakiin isbahaysiga muhimka ah ee u dhexeeya Kikuyu iyo Kalenjin ee ah midka u dhexeeya Mr Kenyatta iyo kuxigeenkiisa waxay ka dhigantahay inaanay u muuqan in dhibaatadu gaari karto halkii ay gaartay 10 sano kahor.
Waxyaabo qariib ah ayaa inta badan dhaca doorashada Kenya kahor, sanadkana kama duwana. Waxa jira hubanti la'aan badan oo ku saabsan waxa dhici doona, balse inta badan dadka Kenyanka ah waxay u rajaynayaan dalkooda inta lagu jiro todobaadkan nabad iyo inuu horey u socdo.